नेपाली नायिकासँग वि´वादमा तानिएका अभिनेताले मुख खोले, चेला सम्झेर कान समात्न खोज्नु मेरो ठूलो ग´ल्ती भयो ! – Butwal Sandesh
नेपाली नायिकासँग वि´वादमा तानिएका अभिनेताले मुख खोले, चेला सम्झेर कान समात्न खोज्नु मेरो ठूलो ग´ल्ती भयो !
काठमाडौं, २५ असार : केही समय यता मनोरञ्जन तथा नेपाली चलचित्र क्षेत्रका कलाकारहरु एकपछि अर्को वि´वादित बनिरहेका छन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा अभिनेता तथा निर्माता भुवन केसी र नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह बीचको वि´वादले नेपाली कलाकारमाथी केही असर पारेको छ ।
एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वाता दिँदै अभिनेता भुवन केसीले आफूलाई जहिले पनि मिडियाले स्क्या´ण्डलका रुपमा मात्र प्रस्तुत गरेको बताएका छन् । उनले आफ्नो ४० वर्षको फिल्म क्षेत्रमा लागेको लगानीमा कसैले पनि औला नउठाएको बताएका छन् ।
उनले फिल्म क्षेत्रमा लागेको ४० वर्षको अवधिमा अहिले सम्म कुनै पनि महिलाले आफूलाई अ´पमानित भएको महशुष गरेको भए पनि सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरेका छन् । उनले आफ्नो छोरासंगै फिल्म खेलेको नायिकाले आफूलाई लगाएको त्यती ठूलो आ´रोपले आफुलाई निकै आश्चर्य लागेको बताएका छन् ।
उनले आफूले जहिले पनि साम्राज्ञीलाई छोरीकै रुपमा हेरेको बताएका छन् । मैले नै भित्र्याएको र मेरै छोरासंग फिल्म खेलेकी छोरी समानकी नायीकाले यस्तो आ´रोप लगाउँदा मलाई निकै दुख लागेको छ, उनले भने, मैले पहिला पनि छोरीकै रुपमा मानेको थिए । अहिले पनि छोरीकै रुपमा मानेको छु ।
उनले कुनै बेला सुटिगंका क्रममा त्यस्तो कुनै व्यवहारले साम्राज्ञीलाई त्यस्तो लागेको भए आफूलाई थाहा नभएको बताए । उनले फिल्मको सुटिगंका क्रममा केही कुरा खान नपाएको भन्दै आ`रोप लगाएको हुनसक्छ, त्यो कुराले आफूलाई आश्चर्य लागेको बताएका छन् ।
उनले साम्राज्ञीले उठाएको विषय पछि भुवन केसीलाई ठिक्क पर्यो भनेर कसैले भनेको छ, कसैको मनमा लागेको छ भने भन्नु होला, उनले आह्वान गरेका छन् । अरुलाई भुवन केसी निर्दोश छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि कोही नबोलेको उनले बताएका छन् । आज भुवनको पक्षमा बोल्दा भोली मलाई पनि वि´वादमा पार्न सक्छन् भनेर कसैले पनि साथ नदिएको बताएका बताएका छन् ।